माग अनुरुप आपुर्ति नहुँदा मल वितरणमा समस्या | Janaandolan
Home समाचार माग अनुरुप आपुर्ति नहुँदा मल वितरणमा समस्या
माग अनुरुप आपुर्ति नहुँदा मल वितरणमा समस्या
मल लिनका लागि विहानदेखि लाइनमा बसेका कृषक
अर्जुनधारा २७ चैत । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका–९ स्थित कालिका बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाहिर विहान ७ बजेदेखि नै किसानहरु आउन थाले । लकडाउनको पालना गर्दै सामाजिक दूरी कायम गर्न उपभोक्ताले नमानेपछि बुधबार रासायनिक मल –युरिया) वितरण नगरी बिहीबार वितरण गर्ने सूचना गरिएको थियो । मल कसरी वितरण गर्ने भनेर कालिकापीठ परिसरमा सामाजिक दुरी कायम राखेरै कालिका बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था सञ्चालक समितिको बैठक बसिरहेको थियो ।
बाहिर किसानहरु लाइन लाग्न शुरु गरिसकेका थिए । संस्थाले बुधबार नै ११ बजेबाट मल वितरण गर्ने भने पनि मल नपाइने त्रास र लामो लाइनमा बस्नुपर्ने समस्याका कारण किसानहरु सातबजेबाट फाटफुट आउन शुरु गरिसकेका थिए । ११ बज्दानबज्दै संस्थाको आसपासमा किसानहरुको भीड बढ्यो । संस्थाले यसअघि मल माग्न आएका डेढसय किसानलाई कुपन वितरण गरिसकेको थियो । कुपन भएकालाई दिने र नभएकालाई पुनः ल्याएर वितरण गर्ने आश्वासन दिए संस्थाका अध्यक्ष कर्णवहादुर तामाङ तथा पदाधिकारी, सदस्यले । तर आएकाजति सबैले मल पाउनैपर्ने अडान राख्दै केही उपभोक्ताले ‘आफ्नालाई मात्रै बाड्छौ होला नि’ भन्दै पाखुरा सुर्कन थाले ।
कालिकापीठको गेटमा मल वितरणबारे सूचना किसान
त्यसैसमय ‘कोरोना भाइरसबाट बचौं, सामाजिक दूरी कायम गरौं, तपाईं आफ्नो घरमै बसेर सुरक्षित रहनुहोस् ……’ लगायतको सूचना बजाउँदै प्रहरीको एक टोली संस्थाको परिसरमा पुग्यो । त्यससमय कालिका बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाको बाहिर सडकमा लाइनमा बसेका उपभोक्ताहरु संस्थाको भित्रपट्ठि कालिकापीठ परिसरमा प्रवेश गरिसकेका थिए । इलाका प्रहरी कार्यालय विर्तामोडका केशव अधिकारी र शनिश्चरे प्रहरी चौकी शनिश्चरेका स.इ.को नेतृत्वमा एकदर्जन प्रहरी सहजीकरणका लागि त्यहाँ पुगेको थियो ।
कोरोना भाइरसबाट बच्न र लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न सन्देश प्रवाह गर्दै प्रहरीको गाडीमा सूचना बजिरहेकै थियो । तर त्यहाँ उपभोक्ता, संस्थाका पदाधिकारीको त कुरै छोडौं, प्रहरी स्वयंलाइ पनि सामाजिक दूरी कायम गर्न र गराउन हम्मेहम्मे प¥यो । प्रहरीले बलचाहिं प्रयोग नगरी बल्ल बल्ल उपभोक्तालाइ बाहिर निकाल्यो । किसानहरु ‘जति पाइन्छ त्यति नै मल लैजाने’ भन्दै कोही कालिकापीठ पूर्वपट्ठि सडकमा लाइनमा उभिए त कोही कालीस्थान मा.वि.को प्राङ्गढमा मलकै प्रतिक्षामा बसे । लगभग तीनसय बढी उपभोक्ताको भीड र ब्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण अन्ततः संस्थाले निर्णय सुनाइदियो–‘कुपन नं १ देखि ५० सम्मका उपभोक्तालाई आज दिउँसो तीनबजेदेखि मल वितरण हुनेछ । ५१ देखि १०० सम्म भोलि विहान ८ बजे र १०१ देखि १५० सम्मका उपभोक्तालाई भोली दिउसो ३ बजे । कुपन नलिएका उपभोक्ताका लागि हामी मल ल्याउने ब्यवस्था गर्छौं ।’
‘अहिलेसम्म आउँदै फर्कदै गरेको तीनचोटि भयो’–उपभोक्ताको लाइनमा उभिएकी अर्जुनधारा नगरपालिका–१० की सिता बस्नेतले भनिन्–‘मकैको सुत्ला च्याप्ने बेला भो, अहिले मल हालिएन भने मकैको घोगा नै लाग्दैन, घोगा लागिहाले पनि दाना पस्दैन ।’ एक विगाह जग्गामा मकै लगाएकी उनले आफूलाई एकबोरा युरिया आवश्यक भएको बताइन् । ‘लगभग १२ कठ्ठामा अगौटे मकै छ, त्यसलाई चाहिं मल हाल्न ढिलो भइसक्यो, अरु चाहिं अलिक पछि हाल्दा पनि हुन्छ’–उनले भनिन्–‘छर्ने बेलामा डि.ए.पी. हालेको, युरिया चाहिं अहिलेसम्म पाएको छैन, अलेलि मल हालेन भने बाली कामै लाग्दैन ।’
अर्जुनधारा–९ का किरण मगरले आफ्नी दिदी इन्दिरा गिरीका लागि मल लिन लाइनमा उभिएको बताए । नजिकै भएका कारण गिरीले भाइलाई मल निकालिदिन भनेपछि उनी लाइनमा उभिएका हुन् ।
मल लिन लाइनमै उभिएकी अर्जुनधारा–१० की दुर्गा दाहालले भने खेती गर्नुभन्दा दैनिक मजदुरी गर्न पोसाउने वेला भएको बताइन् । ‘कुनै बर्ष पनि समयमा मल पाइदैन, सिंचाइका लागि पानी किन्नैपर्छ, जोताई, खेताला हिसाव गर्दा अर्काको खेती कमाउनुभन्दा ज्यालादारीमा काम गर्दा पोसाउँछ बरु’–उनले भनिन्–‘जति पायो त्यति हाल्दै गथ्र्यौं । धेरै, थोरै जति भए पनि दिए त हुने नि ! बन्द नभएको भए पारिबाट ल्याएर पनि हालिन्थ्यो।’ उनले आफ्नो नौ कठ्ठा र अरु ११ कठ्ठा जग्गा अँधियामा कमाएको उनले बताइन् । सबै जमिनमा मल हाल्न उनलाई कम्तीमा एकबोरा मल आवश्यक रहेको समेत सुनाइन् । सरकारले कुनै पनि बर्ष मकै तथा धानबालीको सिजनमा रासायनिक मलको सहज आपूर्ति ब्यवस्था मिलाउन नसक्दा कतिपय उपभोक्ताले पानीट्याङ्कीबाट ल्याएर समेत मल प्रयोग गर्दै आएका थिए । यसबर्ष भने नेपाल र भारत दुवैतिर लकडाउन भएका कारण किसान थप समस्यामा परेका हुन् ।
त्यसो त अर्जुनधारा–१० कि रिता बरालले मल नपाएका कारण मकै पहेंलिन थालेको बताइन् । उनले पनि एक विगाह जमिनमा मकै खेति गरेकी छन् । ‘अहिले ठिक्क मल लगाउने बेला भएको छ, पात पहेलिन थालिसकेको छ।’–उनले भनिन् । मकै खेती गर्ने किसानमध्ये कतिपयले एकोहोरो मकै गोड्दै मल हाल्ने गरेका छन् भने कसैले दोहोरो गोड्नु अघि वा गोडीसक्नेवित्तिकै मल हाल्ने गरेका छन् । अर्जुनधारा–१० कै सुशिला बरालले भने दोस्रोपटक मल हाल्ने बेला भएको बताइन् । ‘अस्ति मकै उम्रिएर एकोहोरो गोड्ने बेलामा हाले’–उनले भनिन्–‘हिजो मात्रै दोहोरो मकै गोडीसकेको छ, पाउँदाखेरि आजै मकैमा मल हाल्नुपथ्र्यो, पाइएन।’ धानचम्मर आउने बेलामा मल नहाले मकैमा घोगा नलाग्ने र घोगा लागिहाले पनि थोताथोती मकै मात्र फल्ने उनको भनाइ छ । एकविगाह मकै खेतीमा कम्तीमा एकबोरा मल लाग्ने उनको भनाई छ ।
संस्थामा जम्मा ७० बोरा मात्रै मल आयात भएको बताइएको छ । तर उपभोक्ताको मागलाई हेर्ने हो भने पाँचहजार बोराभन्दा बढी मलले पनि पुग्छ कि पुग्दैनको अवस्था रहेको बताइएको छ ।
मुख्य गरी अर्जुनधारा नगरपालिका–९, १० र ११ का उपभोक्तालाई कालिका बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाले मल वितरण गर्दै आएको छ । एकाध उपभोक्ताहरु अर्जुनधारा–८ र बुद्धशान्तिबाट पनि आउने गरेका छन् ।
मल नपाउने, पाइहाले पनि महंगो पर्ने, सिजनमा अत्यन्तै कममात्र मल पाइने समस्या अर्जुनधाराका मात्रै नभएर देशभरका किसानको साझा समस्या हो । चालु आ.व.को कूल गार्हस्थ उत्पादनमा २७.५ प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रको योगदान रहने सरकारी प्रक्षेपण छ । रासायनिक मलको अभाव र यसको विकल्पमा प्रयोग गर्न सकिने जैविक मलको उत्पादनमा सरोकारवालाले देखाएको उदासीनताले सरकारी प्रक्षेपण पूर्ण नहुने अवस्था देखिन्छ भने खेतीमा धमाधम काम गर्नुपर्ने बेलामा मलका लागि लाइन बस्नुपर्ने, लाइन बसेर महंगो मूल्य तिर्दा पनि भनेजति नपाइने समस्याले कहिले छोड्छ ? प्रश्न निरुत्तरित छ ।
Previous articleराहतका लागि चामल, दाल पाउन कठिन
Next articleसरस्वतीमा एमबीएम र स्नातकोत्तरको अनलाइन कक्षा शुरु
समाचार माग अनुरुप आपुर्ति नहुँदा मल वितरणमा समस्या